Na-etinye Mobile n'ime Usoro Mgbasa Ozi N'èzí | Martech Zone
Mobile Marketing na-apụta ma bụrụ ihe a na-ahụkarị kwa ụbọchị. N’izu gara aga, m na-eleta ndị ezinụlọ na mpaghara Myrtle Beach ma hụ bọọdụ a. Ọ dị mma ịhụ nnukwu ihe na-adọrọ adọrọ na-ejikọta mobile n'ime atụmatụ ahịa ha niile.
Doug nwere yiri mobile mwekota na ya na saịtị, ị nwere ike ederede MartechLOG ka 71813 ma na-anya mgbe ọ posts! M ebipụ ndị shortcodes na foto a ka onye ọ bụla ghara ịnwa ịnwa idegara ha ozi (ọ na-efu ego onye mgbasa ozi).
Nke a abụghị n'ezie naanị mkpọsa akwụkwọ m hụrụ na mwepụta azụmaahịa mkpanaka. Ahuru m ulo oku oku ka a na aju gi ederede “BANG” na shortcode maka onyinye pụrụ iche, oke!
Site na ijikọta ozi ederede na bọọdụ mkpọsa, Ripley's Aquarium:
Ugbu a nwere ike ịdebe arụmọrụ nke bọọdụ mkpọsa.
Nwere ike ịchọta mmasị dị mma ọhụrụ na-eke.
Gosiputa uzo ohuru nke mmekorita ya na ndi ahia.
Akụkụ ọzọ dị jụụ nke nwere ike ịgụnye na nke a bụ ikike ịdọtara onye mgbasa ozi ma nye ha nọmba ekwentị nke ndị na-azụ ahịa. Cheedị ederede maka Ripley's Aquarium na-enye na nkeji ole na ole ka e mesịrị, onye nnọchianya kpọrọ gị ma jụọ ma ị nwere ajụjụ ọ bụla!
Nke a bụ ihe atụ magburu onwe ya banyere etu mwepu ekwentị nwere ike isi kwalite atụmatụ mgbasa ozi dị n'èzí. Gịnị ka ị na-eji ekwentị mkpanaaka eme?
Tags: mgbasa ozi na-akwụ ụgwọahịa efun'èzí mgbasa oziSMSozi ederede
Etu esi hazie Email iji nwetaghachi onye Ahịa
Jul 16, 2009 na 2: 11 AM
Nke a bụ ezigbo ihe atụ bara uru banyere otu usoro mgbasa ozi ọdịnala nwere ike isi nweta teknụzụ ọhụụ ma dịrị mkpa. Ọ na-eju m anya ihe usoro mgbasa ozi ọdịnala ndị ọzọ nwere ike ịchọta ndụ ọhụrụ site na iji ekwentị na teknụzụ mgbasa ozi ọhụrụ ndị ọzọ.
Daalụ maka ide ya!
Edemede dị egwu, ọ sara mbara ma na-atọ ụtọ! ọ bụ ya mere
na-enyere m aka, na weblog gị dị mma. M ga-ekerịta
URL a na ndị enyi m. Naanị akara saịtị a. Mgbasa ozi n'èzí